Andre Villas-Boas Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahagagana maro tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Home FOOTBALL MANAGER Andre Villas-Boas Tantaram-pahaizana momba ny tantaram-pahagagana maro tsy fantatra momba ny tantaram-piainana
Ny LB dia manolotra ny tantara feno an'ny mpilalao baolina kitra malaza amin'ny anarana; "AVB". Ny tantarantsika Andre Villas-Boas tantaram-pahaterahana bebe kokoa ny tantara momba ny tantaram-piainana tsy hita isa dia mitondra fitantarana feno momba ireo zava-niseho mahatalanjona hatramin'ny fahazazany hatramin'izao. Ny fanadihadiana dia midika ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ireo tranga tsy fantatra izay tsy fantatra momba azy.
Eny, fantatry ny rehetra ny fahaiza-manaon'ny fitantanany saingy vitsy no mihevitra fa ny Andre Villas-Boas Bio dia tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, raha tsy misy adieu, dia aoka isika hanomboka.
Andre Villas-Boas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana -Voalohandohan'ny fiainana
Luís André de Pina Cabral e Villas-Boas dia teraka tamin'ny andro 17 tamin'ny 1977 in Porto, Portugal. Villas-Boas no zaza faharoa sy lahimatoa tamin'i Teresa Maria sy ny reniny, Luís Filipe Manuel.
Villas-Boas dia niteny anglisy tsara hatramin'ny fahazazana noho ny renibeny izay nipoitra avy tao Stockport, Angletera. Tamin'ny taona 16, Villas-Boas dia niaina tao amin'ny trano fisakafoanana iray tahaka an'i Sir Bobby Robson, izay mpitantana ny Porto. Nanjary mpifanila am-pirahalahiana izy ireo taorian'ilay adihevitra baolina kitra teo anelanelan'izy ireo Fotoana izao no nisy ny Villas-Boas nahita ny mpanolotsainy.
Tena tia ny fahaizan'i Robson i Robson ka resy lahatra fa hanome asa azy any amin'ny departemantan'i Porto. Taorian 'ny fandrosoany dia namporisika azy haka ny fahazoan-dàlana ho mpanazatra ny FA izy. Villas-Boas no faralahy sy manan-tsaina indrindra tao amin'ny sekoliny. Nahazo ny fahazoan-diny C izy tamin'ny taona 17, ary ny fahazoan-dàlany B tamin'ny 18. Mahagaga fa nahazo fahazoan-dàlana izy tamin'ny taona 19 ary nahazo ny licence UEFA Pro teo ambany fitarihan'i Jim Fleeting. Ireo fepetra takiana ireo dia midika fa vonona ny hampiofana ekipa na dia tanora aza i Villas-Boas.
Villas-Boas dia nanana fohy kely ho toy ny talen'ny teknikan'ny ekipa nasionalin'ny Virgin Virgin anglisy tamin'ny taona 21, talohan'ny nifindrany tamin'ny asany ho mpanampy mpanampy ao Porto eo ambany José Mourinho. Araka ny Mourinho dia nifindra monina ho an'i Chelsea sy Internazionale, Villas-Boas nanaraka.
Andre Villas-Boas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana -Relationship Life
Tsy misy afa-tsy vehivavy iray ihany eo amin'ny fiainany. Tsy olona hafa noho i Joana Maria izy.
Ao 2004, i Villas-Boas dia nanambady an'i Joana Maria Noronha de Ornelas Teixeira, izay nahazoany zanakavavy anankiroa, Benedita (teraka tamin'ny volana 2009), Carolina (teraka tamin'ny oktobra 2010) ary zanaka iray, Frederico (teraka tamin'ny May 2015). Ireto ambany ireto ny Villas-Boas sy ny zanany vavy roa mahafinaritra.
Indreto ny Andre Villas-Boas sy ny zanany lahy, Frederico Villas-Boas.
Ireto ambany ireto dia i Joana Maria sy ireo zanany roa vavy mahafatifaty.
Andre Villas-Boas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana -Fiainana manokana
Andre Villas-Boas dia manana ny toetrany amin'ny toetrany.
Andre Villas-Boas Tanjaka: Villas-Boas dia mpiara-miasa, diplomatika, tsara fanahy, tia rariny ary ara-tsosialy.
Andre Villas-Boas Fahalemena: Mety ho nanala baraka izy. Tiany ny mitaona hatezerana.
Inona no nitiavan'i Andre Villas-Boas: Manana endriky ny Harmony, fahalemem-panahy izy ary mizara zavatra amin'ny hafa.
Inona no tsy tia an'i Villas-Boas: Tsy tiany ny herisetra, ny fanirery, ny tsy rariny, ny feo sy ny fitoviana.
Amin'ny famintinana, Andre Villas-Boas dia manana toetra am-pilaminana sy madio. Na dia azonao atao ihany aza ny mitazam-pihetseham-po toy ny hita amin'ny fifandraisany amin'ny mpilalao, dia olona iray izay hilaza fa manenina izy. Andre Villas-Boas dia vonona ny hanao zavatra na inona na inona mba hisorohana ny fifandonana ary hihazona ny fandriampahalemana rehefa azo atao.
Andre Villas-Boas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana -Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Andre-Villas Boas dia avy amin'ny fianakaviana iray manan-karena sy mpanjaka talohan'ny baolina nandoavana azy. Izy no zaza faharoa ary zanaka lahimatoan'i Luís Filipe Manuel Henrique ao amin'ny Vale Peixoto de Sousa e Villas-Boas (teraka 29 febroary 1952) sy Teresa Maria de Pina Cabral e Silva (teraka 11 February 1951).
Izy dia miteny anglisy amin'ny fomba maimaim-poana, rehefa nampianarin'i Margaret Kendall renibeny, izay ny reniny dia nifindra tany Portugal avy any Cheadle, Greater Manchester, Angletera, mba hanomboka orinasa divay. Ny rahalahiny Britaniana Douglas Kendall dia mpitari-tafondro ho an'ny RAF nandritra ny Ady Lehibe Faharoa.
Villas-Boas koa dia zafindohalik'i Dom José Gerardo Coelho Vieira Pinto ao amin'ny Vale Peixoto de Vilas-Boas, 1st Viscount ao Guilhomil. Ambonin'izany, i José Rui Villas-Boas, dadatoa dadatoany, dia ny Viscount de Guilhomil, lohatenin'ny lohan'i José Gerado Villas-Boas tamin'ny alàlan'ny mpanjaka Carlos I tao 1890 tamin'ny voalohany.
Farany, ny rahalahin'i Villas-Boas João Luís de Pina Cabral Villas-Boas dia mpilalao horonantsary portogey sy televiziona. Eto ambany ny fijeriny-tahaka ny sary.
João Luís dia manana ampahany kely amin'ny tantara an-tsehatra Mistérios de Lisboa (Mystery of Lisbon).
Andre Villas-Boas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana -Ireo mpankasitraka Chelsea dia nanonona Azy
Ireo mpilalao Chelsea FC indray niantso antsoina hoe Andre Villas-Boas DVD satria isaky ny nahita azy izy dia nandehandeha niaraka tamin'ny drakitra DVD teo ambany sandriny ary nanampy azy ireo nijery azy ireo.
Jereo ny horonan-tsary DVD dia tsy nanampy ireo mpilalao. Niteraka taham-pahaizana 45% izy io. Izany dia nitarika ny tsy fankasitrahan'ny AVB.
Toy ny mpankafy Chelsea manao izany, ...
"Ny mpilalao (Lampard sy Terry manokana) dia tsy nino azy sy ny fomba amam-panaovan'i DVD. Tsy nividy ny DVD izy ireo mba hianatra baolina kitra.
Noho izany, Andre Villas-Boas dia nalaza tamin'ny AVB tamin'ny DVD hatramin'ny nialany tamin'ny mpilalao Chelsea.
Andre Villas-Boas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana -Lozam-pifamoivoizana sy laharana farany
Nipongotra ny fotoana i Villas-Boas tao Chelsea raha maro ireo mpilalao matihanina no naneho ny fahadisoam-panantenany tamin'ny fomba fampiofanana azy. Nanaisotra ny adidiny ho mpitantana Chelsea izy taoriana kelin'izay. Ny portogey dia hatramin'izay nisian'ny tanjona tao Tottenham izay tsy nahalalan'izy ireo velively. Avy eo dia nifindra tany Rosia izy mba hampiofana an'i Zenit St. Petersburg izay nanjary mpanjaka iray fantany.
Andre Villas-Boas Tantara an-tsarimihetsika malaza tsy fantatra intsony momba ny tantaram-piainana -Ny lovan'ny Mpanjaka
Tao amin'ny Zenit St. Petersburg, nahazo trophies telo izy, anisan'izany ny ligy. Na dia teo aza ny lazany dia nahavaha olana taorian'ny nandehanany tany Londres, Villas-Boas dia lasa mpanjaka ho an'ny vahoakany ao Rosia araka ny sary etsy ambany.
Ny Villas-Boas dia heverin'ny maro ho fandalinana lalina ny mpanohitra azy. Ny lalao baolina kitra dia miorina amin'ny fiarovana mafy.
FACT CHECK: Misaotra ny famakiana ny tantaram-pianakaviana Andre Villas-Boas momba ny tantaram-pahibemaso sy ny zava-misy tsy fantatra. amin'ny LifeBogger, dia miezaka izahay mba hahatontosa ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mijery ity lahatsoratra ity ianao dia mametra ny fanamarihanao na Mifandraisa aminay!.
Daty efa namboarina: 18 Desambra 2017
Ny tantaram-pitiavan'i Louis van Gaal momba ny tantaran'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Daty efa namboarina: 12 febroary 2019